Hanyanisi Kunhuwa - Unoziva here kuti ungabvisa sei zvinobudirira? | Bezzia
Susana godoy | 28/04/2021 12:00 | Runako
Kunhuwirira kweonion kunokunetsa here? Chokwadi ndechekuti haisi kungooneka chete patiri kubika asi pane dzimwe nhambo inotoita kunge inoramba yakaiswa pamuviri mumuviri wedu uye nekudaro, inogona kunge isingafadzi. Nhasi uno urikuzoonekana zvachose!
Tichafadzwa nenzira dzinoverengeka kuti tikwanise kubvisa kunhuwirira uku kubva kunzvimbo dzakasiyana, saka unogona kukanganwa nezvake nekusingaperi. Kana iwe usingatendi mazviri, iwe unongofanirwa kutsvaga izvo zvatinokusiira, nekuti kubva nhasi, hwema hweeiii hauchazove dambudziko kwauri.
1 Maitiro ekubvisa hwema hweeiii kubva mumaoko ako
2 Nzira yekubvisa kunhuwa kweonion kubva mumvere
3 Bvisa hwema kubva kumba kwako futi
Maitiro ekubvisa hwema hweeiii kubva mumaoko ako
Mushure mekucheka hanyanisi, zvakajairika kuti maoko edu anhuwe iwo. Kunyangwe isu tichivasuka nesipo, hunhu hwehunhu hahuzogara huchipera. Saka kana uchifanira kuenda kunze uye usade kuenda nayo, unoda akateedzana matipi akadai.
Kune rimwe divi, unogona kukwiza mawoko ako neruoko rwemunyu. Hongu, sekunge yanga iri exfoliant, munyu uri mumaoko unotora hwema hwese uye wotisiira isu tiine ganda rakaonda uye rakachena. Ehe, zviite nemaoko akaoma uye iwe uchaona kuti zvinoshanda sei.
Isu tinoisa mumudziyo muhombe girazi remvura nemapuni maviri evhiniga. Isu tinoisa maoko edu mumusanganiswa uyu kwemaminetsi mashoma uye tobva tageza senguva dzose nesipo nemvura.
Rimu ndomumwe wemishonga yakakura yekuonekana nekunhuhwirira kweonion kubva mumaoko ako. Kuti uite izvi, unoda muto wemonimu, nawo uchazora maoko ako zvakanaka uye womirira kuti vaome. Ipapo, uchageza nesipo nemvura. Rangarira kuti ndimu inogona kuomesa ganda zvishoma, saka kana uchitova nazvo, shandisa zvirinani mishonga iri pamusoro.
Nzira yekubvisa kunhuwa kweonion kubva mumvere
Pamwe pachinzvimbo chemaoko, unoona kuti vhudzi ndiro rakatora munhuwi iwoyo. Zvakanaka, haufanire kunetseka nekuti panezve mhinduro yacho!:
Mushure mekugeza bvudzi rako neyakajairwa shambuu, zvakanakisa kuita yekupedzisira sukurudza neintindi infusion. Ehe, ita shuwa kuti inodziya.
Zvekare, isu tinofanirwa kutaura izvozvo zora juzi remoni mune yekupedzisira sukurudzaIyo ndeimwe yemhinduro huru, asi chenjera, nekuti haifanire kutipa zuva mushure mekuita hunyengeri uhu. Isu tatoziva kuti ndimu inoda kurerutsa bvudzi.
Shandisa shampoo dzinosanganisira michero yemucitrus. Sezvo iri nzira yakanakisa yekukanganisa kunhuwa kunhuwa. Vachakushamisa!
Bvisa hwema kubva kumba kwako futi
Sezvo tanga tichitaura, kana munhuhwi ukagadzwa pamba, hapana munhu anogona nawo, kana zvakadaro zvinoita kwatiri. Saka, munhuwi wehanyanisi ndeimwe yeakanyanya kusimba. Pamusoro peizvi, hazvifadzi kuvanhu vazhinji, izvo zvinotitungamira kuti titsvage dzimwe nzira. Kune yako imba, chinhu chakanakisa kubheja sinamoni. Iwe unoisa rimwe rematavi muhari ine mvura uye rega riite uye riise pamuviri mukicheni kana makamuri nekunhuhwirira uku.
Isu taida kutaura imwe yemishonga mikuru inogara iripo: Iyo soda yekubikisa. Ehe, iwe unogona kuita senge nesinamoni uye kubheja pamvura inodzika neepuniki mbiri dzeichi chigadzirwa. Chete nemhepo yainoburitsa, ndipo patinozoona zvatiri kunyatsotsvaga. Iwe uchaona kuti nekukurumidza sei iwe uchakwanisa kudzikamisa kunhuhwira uye kugona kutaura zvakanaka kune iko kubata kweonion iyo zvirokwazvo yakatova neyako dzungu. Ndeupi mushonga wawaimboshandisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Hanyanisi hwema, ndingaibvisa sei zvinobudirira?
Aya ndiwo mashandisiro anoita uropi hwako pasina kudikanwa kwecaffeine